वैशाख २० र २३ गतेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरु
२o७६ बैशाख २६ बिहीबार
पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्समार्फत बस्यो मन्त्रिपरिषद्को बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका बेला आज पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । भिडियो कन्फेरेन्समा सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सबै मन्त्री
सरकारद्वारा १५ सचिवको सरुवा, को कँहा पुगे ?
काठमाडौं – सरकारले १५ सचिवको सरुवा गरेको छ । सरकारले भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बिहीबार एकैपल्ट सार्वजनिक गर्दै १५ सचिवको सरुवा भएको जानकारी दिएको हो
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय के के छन् ? (सुचिसहित)
काठमाडौं । साउन १६ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्नुहुन्छ – मन्त्री बास्कोटा
काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्माको सिंगापुरमा हुने उपचार खर्च आफैले बेहोर्ने बताएका छन् । सरकारको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार